Daawo muuqaalka: Ra’isul wasaaraha Somalia oo booqday Xabsiga dhexe oo balan qaad u sameeyay maxaabiista |
Daawo muuqaalka: Ra’isul wasaaraha Somalia oo booqday Xabsiga dhexe oo balan qaad u sameeyay maxaabiista
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa maanta kormeeray qeybaha kala duwan ee Xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Garsoorka C/laahi Abyan Nuur ayaa u sheegay Ra’iisul wasaaraha dhibaatada ka jirta Xabsiga waxaana uu sheegay in xabsiga dhexe uusan laheyn adeegyadii nolosha asaasiga u ahaa taasi oo uu xusay inay dhibaato ku tahay Maxaabiista.
Ra’’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhageysiga wasiirka garsoorka kadib sheegay in laga bilaabo maanta ay u fariisanayaan wax ka qabashada dhibaatooyin waliba oo ka jira Xabsiga sida dhinaca caafimaadka, iyo dhismaha Xabsiga.
Tagitaanka Cabdi Faarax ee Xabsiga dhexe waxa ay ka dambeysay kadib markii ay xabsiga cuduro ay ugu geeriyoodeen qaar kalane xabsiga lagala baxay kuwaasi oo meydaddooka laga helay xaafado kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Halkaan hoose ka daawo warbixintaani